Salai Aung Seo Thlah Piak dingin Central Chin Youth Organization Nawlthanh - THE CHINLAND POST
Salai Aung Seo Thlah Piak dingin Central Chin Youth Organization Nawlthanh
July 29 ah AA nih an tlaihmi hna Chin mino pali, pathum cu an thlah than cang hna, Aung Seo belathlah rihlo.
Translated by Salai Bawi Lian Sang
Chin miphun hna le Chin mino pawl ningcang lo in tlaih le hremnak, thahnak vialteatuah tu zeibantuk hriamthlai bu nan si zong ah nan tuah ser nak vialte Central Chin Youth Organization nih kan duh lo.
Salai Aung Soe tlaihnak kong hi Rampum pi, UN tiang theih dih miasi komi AA nih September (30) Paletewa khua thilsining kong he pehtlai in bia fianghnak (No.36/2020) an tuah mi kong ahatlau mi Paletwa mipi hna hi zeitik hmanh ah tlaihnak kan tuah bal lo tiah bialehnak nan tuah mi hi Chin miphun sin ah aphunphun tuahsernak kong ah bia lam phih in tlerhnak, tlaih le that nak vial te AA nih thup nan timh ti kan ruah caahu kan duh kho hrim lo.
4. A tubantuk Chin mino hna le Chin miphun sin ahadiklomi tlaihkhihnak, thahnak le hramhram in velhnak vialteachuah mi kong ah tlangcung mi Chin le Rakhine miphun karlak ah I huatnak le remlonak le Miphun pahnih karlak buainakachuah lai ding hi thinphangasi.
AA nih tlaihmi Salai Aung Soe hiangamdamnak le nunnak kong ah lungretheih in kan um Iamah nan tlaihnak kong he aa pehtlai nak leangamdamnak kong cu mipi sin ah thawng thanhnak kan tuah piak uh.
Central Chin Youth Organization member chungtelasi mi Salai Aung Soe cu AA nih ngamdam te hearannak in kan thlah piak uh law zeibantuk kong le lam poah ah Chin miphun mipi hnaadihlo in mi tlaihnak, hremnak zeitik hmanh ah tuah ti hlah uh tiah kan i hal hna.
Salai Aung Soe cu AA nih hramhram in tlaihnak, Chin miphun sin ahadiklomi tuahsenak, Chinram ah duhpoah in buai le hnahnawhnak, thildikmi kong ah bia thuhphennak le Chin miphun hruaitu hna tleih le harnak pek mi vialte tuah pengasi rihasi ko ah cun Chin mino zong daite in kan um kho ti lai lo i Chinmiphun hunhimnak le miphun pakhat kan sinak cu runven ding inalam tampi in kan i zuam lai tiah thawngzamh nak ca kan chuah.
(Central Chin Youth Organization)
AA မှ ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဆလိုင်းအောင်စိုးအား အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါရန် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် (၃/၂၀၂၀)
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်(AA)မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် (၂၉)ရက်နေ့တွင် ချင်းလူငယ်(၄)ဦးအား အကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးထိန်းသိမ်းပြီး (၃)ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ဆလိုင်းအောင်စိုးကိုမူ ယနေ့တိုင် ထိန်း သိမ်းထားသည့်အပေါ် ဗဟိုချင်းလူငယ်အဖွဲ့အစည်း (Central Chin Youth Organization)မှ အောက်ပါအတိုင်း သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၁။ ချင်းလူမျိုးများနှင့် ချင်းလူငယ်များကို မတရားဖမ်းဆီးခြင်း၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းများကို ကျူးလွန်သည့် မည်သည့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ရပ်ဟူသမျှ ဗဟိုချင်းလူငယ်အဖွဲ့အစည်းမှ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည်။
၂။ ဆလိုင်းအောင်စိုးကုိ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုသည် တစ်တိုင်းပြည်လုံ၊ UN အထိ လူသိရှင်ကြားဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး AA ၏ စက်တင်ဘာ (၃၀) ပလက်ဝဒေသနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့် အခြေအနေမှန်များကို ရှင်းလင်း ချက်အမှတ် (၃၆/၂၀၂၀)တွင် ပျောက်ဆုံးေနေသာ ပလက်ဝဒေသခံများ မည်သည့်အခါတွင်မျှ ထိန်းသိမ်း ထားခြင်းမရှိကြောင်းပြတ်သားစွာ ပြောကြားလိုပါသည်ဟု ပါရှိနေသည်ဟာ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ချင်းလူမျိုးများ အပေါ် နုတ်ပိတ်ရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်းစသည့် အဖြစ်မှန်ကို ဖုံးကွယ်ရန် AAမှ ကြိုးစားနေသည်ဟု မှတ်ယူပြီး လုံး၀(လုံးဝ)ကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည်။
၃။ ယခုလို ချင်းလူငယ်များနှင့် ချင်းပြည်သူများကို မတရားဖမ်းဆီးခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်း ခြင်းများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းေကြာင့် တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းဖြစ်သော ချင်းနှင့် ရခိုင်လူမျိုးများအကြား ရန်လိုမုန်းတီးမှုများ နှင့် လူမျိုးရေးပြသနာများ ပိုမိုပြင်းထန်ကြီးထွားလာမည်ကို စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်မိသည်။
၄။ AA မှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသော ဆလိုင်းအောင်စိုး၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အသက်အန္တရယ် အလွန်စိုးရိမ် ရပြီး သူ့ကိုဖမ်းဆီးရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းနှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို အမြန်ဆုံးလူထုကို အသိပေး ရှင်းလင်းစေလိုသည်။
၅။ ဗဟိုချင်းလူငယ်အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဆလိုင်းအောင်စိုးအား AA မှ ကျန်းကျန်းမာမာ အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးပါရန်နှင့် မည်သည့်အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ချင်းပြည်သူနှင့် အရပ်သားများ မတရား ဖမ်းဆီးခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မပြုလုပ်ရန် အလေးနက်တောင်းဆိုသည်။
၆။ ဆလိုင်းအောင်စိုးအား AA မှ မတရားဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ချင်းလူမျိုးများ နည်းမျိုးစုံဖြင့် မတရား ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာ ရမ်းကားေသာင်းကျန်းြခင်း၊ အဖြစ်မှန်များဖုံးကွယ်ရန် ချင်းလူ ထုေခါင်းေဆာင်များ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုများပြုလုပ်နေပါက ချင်းလူငယ်များ ငြိမ်နေမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ချင်းလူမျုိးများဖြစ်တည်မှု၊ လုံခြုံေရး၊ လူ့ဂုဏ်သက္ခာကာကွယ်ရန် နည်းမျုိးစုံဖြင့် ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ် ေကြာင်း အလေးအနက် သဘောထားထုတ်ပြန်သည်။
Previous Kalaymyo Lai Seinno Phu Covid-19 Rai Runvennak Ah Volunteer Rian An Tuan
Next Hakha-Gangaw Lam Ah Motor A Let A Mawngtu A Thi